2019 वर्तमान उच्च गति टिकट मूल्यहरू YHT समय सारिणी र टाइम्स - RayHaber
घरटर्कीकेन्द्रीय एनाटोलिया क्षेत्र06 अंकारा2019 वर्तमान उच्च गति टिकट मूल्यहरू YHT तालिका र तालिका
30 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 06 अंकारा, 11 Bilecik, 26 Eskisehir, 34 इस्तांबुल, 42 Konya, केन्द्रीय एनाटोलिया क्षेत्र, इंटरसिटी रेलवे सिस्टम्स, रेल, साधारण, फास्ट ट्रेन, HEADLINE, Marmara क्षेत्र, टर्की 2
2019 सस्तो रेल टिकटको मूल्य
एक्सएनयूएमएक्स वर्तमान हाई स्पीड टिकट मूल्य वाईएचटी समय सारिणी र टाइम्स: इन्टरसिटी यातायातमा हाम्रो जीवन सजिलो बनाउने उच्च गतिको रेलहरूले विभिन्न शहरहरू, यात्रुहरू र संस्कृतिहरूलाई जडान गर्न जारी राख्छन्। विभिन्न यात्रा सुविधाहरू र गाडीका प्रकारहरूका साथ विभिन्न शहरहरूमा सेवा दिने उच्च गति रेलहरू ठूलो श्रद्धाका साथ तयार छन् र उच्च प्राविधिक सुविधाहरू छन्। TCDD यातायात प्रदान गर्दछ तपाई लाई एक लालची यात्रा को अवसर सब भन्दा चाँडो तरीकाले यस क्षेत्र मा सबै नवीनता र प्राविधिक विकास एकीकृत गरेर। 2019-07-10 मा, YHT टिकट मूल्यहरु 2019 प्रतिशतले बढाइएको थियो। वर्तमान समय सारिणी टिकट तालिका हाम्रो समाचारमा छ।
07-10-2019 मा TCDD द्वारा घोषणा गरिएको नयाँ समय दर अनुसार, अंकाराबाट इस्तानबुल सम्मको उच्च-स्पीड ट्रेन टिकटको मूल्य 71 TL बाट 85.50 TL मा पेन्डिकमा वृद्धि भयो। इस्तानबुल to अंकारा Halkalı वा Bakirkoy फेरि, 71 लीरा 96 TL को मूल्य बढ्यो। आन्कारा-एस्कीइहिर र आंकरा-कोन्या उच्च-गति ट्रेन टिकट पनि एक्सएनयूएमएक्स टीएलबाट एक्सएनयूएमएक्स टीएलमा पुगेको छ। छुट र टिकट (प्रतिशत 31) मूल्य आंकड़ा- Eskişehir 37.50 TL 15 TL'te आउटपुट।
उच्च गति ट्रेनहरूले पनि छुट छुटबाट फाइदा लिन सक्दछन्। यी छुटहरू 20% Ile 50% परिवर्तन हुँदैछ।
इस्तानबुल - अन्कारा उच्च गति ट्रेन समय:4घण्टा 20 मिनेट
मानक टिकट शुल्क: 85,50 TL
लचिलो टिकट शुल्क: 103 TL
ब्यापार टिकट शुल्क (मानक): 124 TL
ब्यापार टिकट शुल्क (लचिलो): 149 TL
ANKARA - ESKİŞEHİR 2019 संक्षिप्त ट्रक टेनिस प्रिन्सेस
अंकारा - Eskişehir उच्च गति ट्रेन यात्रा समय: 1 घण्टा 36 मिनेट
मानक टिकट शुल्क: 37,50 TL
लचिलो टिकट शुल्क: 45 TL
ब्यापार टिकट शुल्क (मानक): 54,50 TL
ब्यापार टिकट शुल्क (लचिलो): 65,5 TL
ANKARA - कोनिया 2019 संक्षिप्त ट्रक टेनिस प्रिन्सेस
अंकारा - Konya उच्च गति ट्रेन यात्रा समय: 1 घण्टा 55 मिनेट
ब्यापार टिकट शुल्क (लचिलो): 65 TL
इस्टबुल - कोना जम्मू क्विक ट्राफिक टिकटिक
इस्तानबुल - Konya उच्च गति ट्रेन यात्रा समय:4घण्टा 20 मिनेट
मानक टिकट शुल्क: 103.50 TL
लचिलो टिकट शुल्क: 124,50 TL
ब्यापार टिकट शुल्क (मानक): 150,50 TL
ब्यापार टिकट शुल्क (लचिलो): 180,50 TL
YHT प्रचार फिल्म
अंकारा इस्तांबुल हाइ स्पीड रेल टिकट तालिका र अनुसूची 12 / 07 / 2019 एन्सिटी उच्च गति रेलहरू परिचयको साथ, यात्रा गर्ने मौका सजिलो र बढी मनोरञ्जन भएको छ। TCDD ट्राफिकले तपाइँलाई सबै भन्दा नवाचारहरू र तीव्रतम मार्गमा यस क्षेत्रमा प्राविधिक विकासहरू एकीकरण गरेर एक अनिवार्य यात्रा अवसर प्रदान गर्दछ। अङ्कारा-इस्तांबुल उच्च स्पीड रेल दैनिक अंकारा-इस्तांबुल र इस्तांबुल-अंकारा बीचको6बीचको दौड गर्दछ। इन्कानाराबाट प्रस्थान गरेको रेल सिन्सिन्सन, पोल्लिली, एस्किशिर, बोउजुकि, बेइलीकिक, अरिडिया, इज्मिट र गेजिजमा रोकिएको छ र लगभग4घण्टा 15 मिनेटमा पेन्डिकमा पुग्छ। अंकारा-इस्तांबुल केहि गतिमा रोकिएको छैन, तर रेलको आगमन समय ...
इस्तांबुल अंकारा उच्च स्पीड रेल टिकट तालिका र समय तालिका 12 / 07 / 2019 इन्टनबुल अंकारा वाईएचटी, एक अन्तरसिटी उच्च-गति ट्रेनहरू, यी दुई भीडभाड र उच्च यातायात शहरहरूमा यातायातको सुविधा ब्यवस्था गरेको छ। TCDD यातायात यो क्षेत्र मा सबै नवीनता र प्राविधिक घटनाहरू यसको प्रणालीमा छिटो तरिकामा एकीकृत गरिएको छ र यात्रुहरूलाई रमाईलो र रमाईलो अवसरको साथ उच्च-स्पीड ट्रेनहरू प्रदान गर्दछ। इस्तानबुल-अंकारा हाई स्पीड ट्रेन आंकडा-इस्तानबुल र इस्तानबुल-अंकारा बीच दैनिक6बीच चल्दछ। इस्तानबुल पेन्डिकबाट छुटेको ट्रेन गिन्बे, इजमिट, अरिफिए, बिलेक, बोजुयुक, एस्किसेहिर, पोलाटली र सिनकन हुँदै क्रमशः एक्सएनयूएमएक्स घन्टा4मिनेटमा आंकडा आइपुग्छ। इस्तानबुल-अंकारा ...
अंकारा Eskişehir हाई स्पीड रेल टिकट तालिका र अनुसूची 30 / 08 / 2019 अन्कारा एस्कीइहिर हाई स्पीड टिकट मूल्य प्रस्थान समय र समय: आंकडा एस्कीहिर हाई स्पीड ट्रेन एस्कीहिर-इस्तानबुल-अन्कारा लाइनको एक स्टप हो। अंकारा - Eskişehir उच्च-गति ट्रेन हरेक दिन संचालित। यो लाइन मार्फत5यात्राहरू गर्न यो सम्भव छ। थप रूपमा, अंकारा-एस्कीहिर लाइन पनि अवस्थित छ। आंकड़ा - Eskişehir उच्च गति ट्रेन, जो6यात्रा को एक हो, 13 यात्रा प्रति दिन बनाउँछ। यो समय अल्प-अवधिक भएकोले, त्यहाँ कुनै खाद्य गाडी छैन। रेल स्टेशनहरू शहर मा भएकोले, अंकारा र Eskişehir बीचको यात्रा को बारे मा 1,5 घण्टा लाग्छ। यो ...
Eskisehir अंकारा उच्च स्पीड रेल टिकट अनुसूची र अनुसूची 12 / 07 / 2019 TCDD ढुवानीले तपाईंलाई शहरहरू बीच उच्च गति र उच्च गुणस्तरको रेलको समयको प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। Eskişehir र अंकारा, जुन यी शहरहरु बीच स्थित छ, तीव्र गति को गति को प्रयोग तीव्र गतिशील र सक्रिय रूप देखि, विशेष रूप देखि त्यहाँ दुई ठूलो शहरहरु छन् र उनि एक ठूलो जनसंख्या छ। विशेष गरी Eskişehir र अंकारा को विद्यार्थी क्षमता मा विचार, यो प्रणाली धेरै उपयोगी र विद्यार्थीहरुको लागि समय बचत छ। Eskişehir-अंकारा हाई स्पीड रेल यो Eskişehir-इस्तांबुल-अंकारा लाइनमा बन्दुकहरू मध्ये एक हो। कुलमा, यो लाइनमा यो लाइनमा5यात्राहरू प्रदर्शन गर्न सम्भव छ।6अभियानहरु मध्ये एक एस्किस्साइर-अंकारा छ ...
अंकारा क्यान्याई उच्च स्पीड रेल टिकट तालिका र अनुसूची 12 / 07 / 2019 अंकाराबाट निस्कने उच्च गतिको रेलहरूमध्ये एक अंकारा-कोन्या YHT छ। यस परियोजनाको साथ, जो जीवनलाई सजिलो बनाउछ र समय बचत गर्दछ, एक्सएनएमएक्स घण्टाहरू अंकारा र कन्न्या बीचमा 1 मिनेटमा घटाइन्छ। यो उच्च गतिको रेल विशेष रूपमा फायदेमंद र आर्थिक रूपमा, विशेष गरी यात्रीहरूको लागि व्यापार र प्रशिक्षण यात्रामा। TCDD ढुवानीले सबै प्रकारका टेक्निकल र आधुनिक तरिकाहरू उच्च गतिमा रेलहरूमा प्रयोग गरेको छ र यस दिशामा सबै प्रविधिको सम्पूर्ण प्रणालीलाई एकीकृत गर्न व्यवस्थित गर्दछ। अंकारा-कोन्या हाई स्पीड रेल दैनिक आधारमा चल्छ। यी उडानहरूको औसत अवधि 50 घण्टा7मिनेट हो ...
30 अगस्ट मुबारक विजय दिन!
YHT टिकट | उच्च गति रेल टिकट
यसका लागि उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईदिनु भएको छ। यसका बारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ। आदि .. प्रमुख विशेषज्ञहरू ... र प्रेसका सदस्यहरू .. तिनीहरू गरिब छन्? मसँग अनाथ आय छैन ?? .. torpillimi? छूटबाट कटौती गर्नु हुँदैन। आय र असक्षमताबाट फाइदा नगर्ने बेरोजगार व्यक्ति धनी र टाढापालोहरूबाट लाभ उठाउँदैनन्। ठूला ट्रकहरू जुन लेखिएका छैनन् त्यहाँ पनि छूटबाट लाभ उठाउँछन्। ... .. प्रयोग गर्ने अधिकार नविकरण गरिएको छ। सही हुन
YHT - उच्च गति ट्रेन समाचार RAYHABERतपाईं अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ!
इस्तांबुल अंकारा उच्च स्पीड रेल टिकट तालिका र समय तालिका
इस्तांबुल क्यान्याई उच्च स्पीड रेल टिकट तालिका र अनुसूची
कोन्या अंकारा उच्च स्पीड रेल टिकट तालिका र अनुसूची
अंकारा इस्तांबुल उच्च गति ट्रेन मूल्य कति पैसा? .. TCDD वर्तमान टिकट मूल्यहरु
उच्च स्पीड रेल टाइमसेट योग्य 2019